Maxay sababta ay dadku u baahan yihiin in ay garab iCloud shaqeyn on iPhone / iPad?
Baahida loo qabo Goldogob hawshooda u iCloud inta badan waa ay yar tahay sida wax mar walba ka war faahfaahin iCloud account isaga ama iyada. Laakiin haddii ay dhacdo qalab aad la si khalad ah ama si qalad ah loo qaaday qof (sida caadiga ah la soo xaday), Goldogob hawshooda u iCloud waa xalka keliya ee si hagaagsan mid niyad wanaag awoodi karin si aad u hesho faahfaahin lagama maarmaan ah oo ku saabsan milkiilaha aaladda ee.
xisaabaadka iCloud, in kastoo aan si fudud jabsaday, wali waa la jabsaday karo by Anonymous xirfad ama si fudud dad waa ay ka warqabaan faahfaahinta akoonka aad. Haddii mid ka mid ah isku daydo in ay galaan ay jabsaday (ama) account ishana ay isku dayga joogtada ah, iDevice ee xaqiiqda ah dib ayaa laga yaabaa in ay is iyo ku keento khasaare guud ee xogta, taas oo waa wax milkiilaha ma doonayo in ay ka dhacaan.
Goldogob iCloud ay hawshooda la isticmaalayo habka DNS.
Inkastoo aad qabto iPhone ee ah hay'ad aan la aqoon dhameystiran oo aad rabtid inaad isku soo celi ninkii neefka lahaa eeliyaa oo u baahan faahfaahin ku haboon oo ku saabsan milkiilaha, tan lagu gaari karaa in muddo waqti kooban ay codsanaya habkan soo socda.
Daaqadda hawlgelinta, riix badhanka guriga ka dibna dooro goobaha Wi-Fi oo markaas garaac 'waan' addoonsi ay goobaabin. Hadda waxa la joogaa wakhtigii si meesha looga saaro server DNS jira ku riday caado ka mid ah in mooshin.
Talaabada 1: Waxaad u baahan tahay in ay galaan server cusub DNS sida 78.109.17.60.
Talaabada 2: dib Tubada.
Talaabada 3: samaysay tuubada.
Talaabada 4: Tubada on caawimaad shaqeyn.
Marka aad gaadho kor ku xusan tallaabooyinka fudud ku xusan, farriin ka soo muuqan doono iyagoo leh aad si guul leh ku xiran in aan server ".
Tubada on menu ku yaal dhinaca midig sare oo ugu rogto iyada oo tiro ka mid ah codsiyada la heli karo si loogu isticmaalo sida YouTube, Mail, Maps, Games, Bulshada, User chat, Video, Audio iyo in ka badan. Dooro codsiga ku habboon oo aad u malaynayso ku siin karaan macluumaadka aad u baahan tahay in qofka iska leh ee telefoonka.
Goldogob hawshooda u iCloud iyadoo la kaashanayo qalab ku haboon.
Waxaa jira tiro kooban oo qalab functional heli karaa in ka iman kartaa haan ee Goldogob hawshooda u iCloud ee aad iPhone ama iPad. Mid ka mid ah magacyada waa 'iCloud tallaalka hawshooda u qalab version 1.4'. Magaca qalab ku taal by waxa uu sheegaayo oo waa qalab aad u fududahay in la isticmaalo.
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka mid ka mid ah in la raaco si ay u isticmaalaan qalab wax ku ool ah.
Talaabada 1: Download iyo rakibi codsiga on desktop.
Talaabada 2: Burcad codsiga iyo xiriiriyaan iPhone ama iPad via cable USB aad desktop-ka.
Talaabada 3: Qalab hadda iskaan doonaa qalab aad iyo akhriya tirada ay IMEI.
Talaabada 4: Riix 'ay garab shaqeyn Lock' button iyo samir ku sug, si loo soo gudo in lagu dhameeyo. Qalab iyadoo la kaashanayo aad qalabka code IMEI ku xidhi doonaa servers Apple ka halkaas oo ay joojin doonaan iyo tirtirto dhammaan xisaabaadka iCloud lala of qalab aad.
Talaabada 5: Marka geedi socodku waa dhameystiran, barkinta aad telefoon oo reboot. Waxaad arki doontaa in qufulka iCloud ayaa si joogto ah looga saaro iyo cayn kasta oo halkan ma ay hawshooda ka hor waxaa looga baahan yahay in ay isticmaalaan qalabka.
Sida loo tirtiro xogta fog ka badiyay iPhone.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta dacwadu, mid ay ogaadaan in mar xogta oo dhan laga masaxayo iPhone, mar dambe ma aad awood u yeelan doonaan in la isticmaalo 'Raadi aan iPhone' iyo xogta oo dhan dhammaantiis la tirtirayaa.
Talaabada 1: Daahfurka Raadi aan iPhone on qalab kasta oo macruufka iyo geli aqoonsiga xisaabtaada. Waxaad isticmaali kartaa qalab kasta oo macruufka ah ee habkan.
Talaabada 2: Marka aad gasho, waxaad yeelan doontaa in aad u aragto oo dhan qalabka ay ku xiran tahay xisaabtaada. Dooro qalabka aad doonaysid in aad masixi.
Fadlan la soco in qalab aad noqon doonaa arki kaliya haddii Raadi feature iPhone yahay qalab aad laga badiyay oo firfircoon.
Talaabada 3: Tubada badhanka tallaabooyinka hoose iyo garaac masixi.
Talaabada 4: Waxaa lagu weydiin doonaa in aad u xaqiijiso in ay masixi aad badiyay iPhone oo markaas u baahan doontaa in aad ku buuxisid aqoonsiga xisaabtaada hal mar la soo dhaafay.
Talaabada 5: Hadda waxa aad u baahan doontaa inaad buuxiso tirada xiriir ah in ay ka soo muuqan doono on your lumay iPhone oo ay la socoto fariin ku haboon. Sidaas qof deeqsi heli kartaa in xiriir aad la caawiyo in aad dib u soo ceshano aad iPhone.
Talaabada 6: Marka macluumaadka loo baahan yahay waa la helay, tirtiro xogta bilaabi lahaa oo laguu soo sheegi doonaa marka la dhameeyo.
Waa quruxsan fudud si aad account iCloud ammaan ah haddii aad ogtahay tricks fudud. Haddii aad isticmaalayso iCloud aad iPhone ama qalab kale oo wax Apple, raacaya tallaabooyinka soo socda ay xaqiijin doonaan in macluumaadkaaga lagu hayaa ammaan ah. Waxaa kale oo u fududahay in la isku tallaalka iCloud hawshooda!
> Resource > iCloud > iCloud xirantay: Sida loo dhaafayo iCloud shaqeyn on iPhone